By pass: niara-matin’ny lozam-pifamoivoizana izy mivady | NewsMada
By pass: niara-matin’ny lozam-pifamoivoizana izy mivady
Tsy nampoizina! Nifatratra tany amin’ilay taxi-be ny fiara madinika iray nentina mpivady rehefa niala moto nipoitra tampoka iry voalohany. Mafy ny fifandonana, ary niforitra mihitsy ny lohan’ny fiara roa. Tery tao ireo mpivady nitondra ilay fiara madinika niloko mena ka nitarika ny fahafatesany. Nalefa eny amin’ny HJRA ny razana, omaly antoandro. Nisy koa ny naratra tao amin’ilay taxi-be, saingy tsy nisy natahorana ny amin’ireo olona ireo.
Araka ny fanazavan’ny olona nahita ity loza ity, nijanona tampoka ilay taxi-be io noho ilay moto nipoitra tampoka. Ilay fiara menamena kosa, nahita izany, ka niala ilay moto, ary nifatratra tany amin’ilay taxi-be. Nandeha mafy ihany ilay fiara ka anisan’ny nahamafy ny fifandonana izany na efa nijanona aza ilay taxi-be io. Ilay moto kosa, tsy voadona ary tsy nijanona fa niala haingana teny an-toerana.
Namonjy ireo naratra ny olona teny an-toerana, tonga teny ihany koa ny mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana. Tsy nisy azo natao afa-tsy ny nitondra ny naratra sy ny razana teny amin’ny hopitaly. Nanahirana ny nisokitra ireo mpivady tery tao amin’ilay fiarakely.
Amin’ny ankapobeny, anisan’ny mahatonga ny loza ny fandehanana mafy, ny tsy fitandremana, ny tsy fanajana ny hafa. Na mitandrina aza ny hafa, mety hamoa-doza ny sasany. Ny fampiasana ny lalana misy fahalalana sy asa saina ihany koa fa tsy mandeha ho azy amin’izao fotsiny.